I-Alpha Dayz Hack 🥇 Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
I-Alpha Dayz likaHack yilelo elaligqokwe
Ukusebenzisa i-DayZ Alpha Hack yethu cishe kuyindlela eqinisekisiwe yokuthola impumelelo kulo mdlalo.
Ufuna ukuzwa ukuthi kunjani ukulawula izimbangi zakho? Thenga ukhiye womkhiqizo wosuku olungu-1 namuhla!
Uma uthanda lokho okufanele sikunikeze, thola ukufinyelela isikhathi eside! Thenga ukhiye womkhiqizo weviki elingu-1 namuhla!
Kwesinye isikhathi kufanele uzinikele kubuciko bokugenca. Thenga ukhiye womkhiqizo wenyanga engu-1 namuhla!
Kunokuhlukahluka okuningi okuya ekuphumeleleni
ngesikhathi sokuzidela kwakho kwe-DayZ, futhi ukusebenzisa i-DayZ Alpha Hack yethu kuzokhawulela izinkinga ohlangabezana nazo. Noma ngabe amaZombi noma abadlali bangempela, ukusebenzisa ithuluzi lethu kuzokugcina uvikelekile.
Imininingwane ye-DayZ Alpha Hack
Le DayZ Alpha Hack yenzelwe ngokuphelele ukukusebenzela kahle, noma ngabe udinga usizo ngaluphi. Le hack ifika i-kernel ngokuphelele futhi ifaka imenyu ye-GDI, ikunikeze umuzwa wokubusheleleka futhi owenziwe kahle wokugenca ngawo wonke umdlalo. Yize le DayZ Alpha Hack izofika i-HWID ikhiyiwe, ungathenga isifafazi se-HWID kithi lapha eGamepron! Awufuni ukushiya izinto zibe sethubeni emdlalweni onjengeDayZ, njengoba kungukusinda kwabanamandla kakhulu - yiba indoda yokugcina (noma owesifazane!) Emi ngokusebenzisa i-DayZ Alpha Hack yethu ukuhlala phambili.
IWindows 10 (2004-20H2)
Le DayZ Hack iza ifakwe izici eziningi ze-DayZ Wallhack, njenge-Enemy ESP (Skeleton ESP), Enemy Information (Distance, Zombies), kanye ne-Loot ESP! IDayZ Alpha Aimbot ifaka phakathi i-Adjustable Aimbot Distance, kanye ne-Adjustable FOV Circle neModi Ethulile; inakho konke okudingayo ukuze uchume.
Isitha ESP (Bone)
Imininingwane Yesitha (Ibanga, iZombies)
I-Loot ESP (ibanga; izikhali)
Ibanga le-Aimbot eliguquguqukayo
I-Aimbot FOV eguquguqukayo
Mayelana neDayZ Alpha
IDayZ ngumdlalo wokusinda ongadlalwa noma uwedwa noma nabangani abambalwa, kukuwe ngokuphelele. Ukuqhekeka kulula kakhulu ukukusebenzisa futhi konke okumele ukwenze ukuvula ukugenca, sebenzisa umdlalo wakho, wenze ngezifiso izilungiselelo, bese udlala! Ungakhetha ukusakaza ngalokhu kukopela kwenziwe kwasebenza, njengoba ababukeli bakho bengenakukwazi ukuthi kwenzekani; ukukopela kwangaphandle ngokuphelele okungadlalwa kusikrini esigcwele. Kufanele ube nokuvikelwa kukhutshaziwe ngenkathi usebenzisa i-DayZ Alpha, noma kungenjalo kungenzeka kungasebenzi kahle. Iphelele lapho ufuna ukufeza ubukhulu ku-DayZ.
Kungani usebenzisa i-DayZ Alpha ngaphezu kwabanye abahlinzeki?
Uthenge kangaki iDayZ Hack, ukuze nje ubone ukuthi uchithe imali yakho? Awusoze wamukela umkhiqizo oshibilikayo uma uthenga ku-Gamepron, futhi kusobala ukuthi abasebenzisi bethu bayabonga ngalelo qiniso! Uzohlala njalo ufinyelela kuzici ezinhle kakhulu i-DayZ hack engakunikeza nge-Gamepron, futhi sikunikeza ukuguquguquka ngokunikeza izinketho zesikhathi ezahlukahlukene ezimbalwa. Ukukopela kwethu nakho akutholakali, ngakho-ke asikho isidingo sokuzibuza ukuthi ngabe i-akhawunti yakho isengozini ngenkathi usebenzisa ama-DayZ Hacks ethu!
Ungumdali wesiphetho sakho lapha eGamepron, njengoba imenyu yethu engaphakathi komdlalo iyiyona enembile kunazo zonke ozothola ku-inthanethi. Ama-hacks amaningi azokuphoqa ukuthi wenze izinguquko kuzilungiselelo zakho ngaphambi kokuthi uqalise umdlalo, okusho ukuthi uma usuwuvulile umdlalo, akusekho ukubuyela emuva! Ngokujabulisayo, i-Gamepron isishintshe izinto ngokuzungezile - hhayi kuphela lapho ungenza khona ushintsho ngenkathi udlala, kepha imenyu yethu engaphakathi komdlalo nayo inezinketho eziningi kunalokho ongakuthola ku-DayZ Hack yendabuko. Lungisa ijubane le-Aimbot yakho, yiziphi izindawo ongathanda ukuzikhomba, noma izinketho zakho ze-ESP.
A5. Cha, lokhu kukopela akubandakanyi i-hwid spoofer. Sinikeza i-hwid spoofer ehlukanisiwe ye-Dayz
Thola izinto ezihamba phambili usebenzisa iDayZ Alpha ESP yethu, noma vele ukhiphe abaphikisi bakho ngokuxhamazela ngokunika amandla iDayZ Aimbot yethu ethembekile. I-GamePron inakho konke okudingayo!
I-Excel bese uncintisana nabadlali abahamba phambili besebenzisa iHackZ Alpha Hack!
Ilungele Yengamela nge-Dayz Alpha Hack yethu?